Myanmar Local News: အစိုးရက ..ဘာလဲ ၊ အတိုက်အခံက ဘယ်လဲ ?
ကျွန်တော့်အထင် ၁၉၉၆ ခုနှစ်( မြန်မာ့ခရီးသွားနှစ်) ခန့်က ထင်တယ်။ကမ္ဘောဒီယားရဲ့ မြို့တော်ဖနွမ်ပင် က မြန်မာပြည်၏ မြို့ငယ်လေးတစ်ခု အဆင့်မှာပဲရှိနေ သေး တယ်။ ရန်ကုန်မြို့ကို ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ဆိုတာက အိပ် မက် လို့ တောင် ဆိုနိုင်ပါတယ် ။
အန်ကောဝပ်ကျောင်းတော်ကြီးရှိနေပေမယ့် မြို့တော်ကို တောင် အဆင့်မြင့်မြင့် ဖြစ်အောင် အနေအထားတစ်ခု ရောက်ဖို့ အတော် ရုန်းကန်ကြိုးစားနေခဲ့ကြရတယ် ။ သို့ပေမယ့် -
ယခင် စစ်အစိုးရက ပိတ်ဆို့အရေးယူခံရမှုတွေကို မျက်တောင်မခတ်ပဲစစ်အင်အားတိုးတက်စေဖို့ , နိုင်ငံတွင်း ငြိမ်ဝပ်ပိပြားစေဖို့ကိုသာ ဦးစားပေးခဲ့တယ် ။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သင့်တဲ့ တကယ့် ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု မှာက သိသိသာသာ ကဏ္ဍအစုံမှာ အားနည်း ညံ့ဖျင်းခဲ့တယ် ။ စစ် အင်အားစုတောင့်တင်းခိုင်မာအောင် လုပ်ဆောင်ပြီး ၎င်းတို့ နိုင်ငံရေး မူဝါဒပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို လိုလားတဲ့အချိန်မှာမှ , နေရာဖယ်ပေးမှုတွေကို ပြုလုပ် လို့ ယနေ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးကို ဖော်ဆောင်ခဲ့တယ် , ဆိုတာကျုပ်တို့ ပြည်သူလူထုတွေ မျက်မြင် တွေ့ခဲ့ရပါတယ် ။
ထိုကာလ တလျှောက်လုံးမှာ လက်တွေ့ကျကျ ခံစားနေရတဲ့ နိုင်ငံတကာရဲ့ ထိုးနှက်ချက်တွေက ကျွန်တော် တို့ မြန်မာနိုင်ငံ ပိတ်ဆို့ အရေးယူ ခံရမှုတွေနှင့် အတူ ဒေသတွင်း အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေက ရွှေတွင်း၊ ရေနံတွင်းတွေပေါ်ပေါက်တာထက် ပိုမိုတဲ့ တိုးတက်မှုတွေ ၊ အကျိုးအမြတ်တွေကို ရရှိ သွားခဲ့ရ တာတော့ အမှန်ပဲ ။
ပြည်ပ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုတွေက လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားခဲ့ရပြီး မြန်မာ့ရေပိုင်နက် မြေပိုက်နက်တွေ ,ကနေ ကွေ့ဝိုက် ကာ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစေပြီး မြန်မာပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကို ပိတ်ဆို့ထိုးနှက်စေ ခဲ့တယ် ။ မြန်မာပြည်သူ လူထုနဲ့ ,ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု အပိုင်း ကဏ္ဍတွေကတန့် သွားခဲ့ရပြီး လုပ်နိုင် သလောက် အရာမထင်ပဲ အသိပညာရှင် , အတတ်ပညာရှင်တွေ ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေက ပြည်ပကို ရောက်ရှိမြန်မာပြည်က ထွက်ခွာကုန်ကြလို့နိုင်ငံတော်ရဲ့ စီးပွားရေးကျဆင်းပြီးဆင်းရဲတွင်းက နက်လာ ခဲ့ရတယ် ။ ပြည်တွင်းက လူငယ်လူရွယ်တွေ ရဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့ အနာဂတ်က ပြည်ပ ထွက်ပြီးဘဝ အခြေ ကျအောင် လုပ်ဆောင်ဖို့ဘက် အလွယ်လမ်းကို ဦးတည်သွားတယ် ။
တကယ်တမ်း အဲဒီ ပိတ်ဆို့မှု ပြစ်ဒဏ်တွေကို လက်တွေ့ခံစားခဲ့ရတာဘယ်သူတွေလဲ? အနစ်နာခံပြီး ကျောကော့အောင် ခံခဲ့ရတာ ဘယ်သူတွေလဲ ? စစ်အစိုးရလည်း မဟုတ်သလို ယနေ့ လက်ပန်းပေါက် ခတ်ပြီး ကြွေးကြော်နေကြတဲ့ အတိုက်အခံဆိုသူတွေလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
ပိတ်ခိုင်းတဲ့သူက ပိတ်ခိုင်းတဲ့အကြောင်းပြချက်ကို ခိုင်ခိုင်မာမာ စွဲကိုင်ထားသလို ၊ချုပ်ကိုင်ထားတဲ့ သူကလည်း ချုပ်ကိုင်ထားရတဲ့အကြောင်းရင်းကို ချပြပြီး ဗိုလ်နေမြဲ , ကျားနေမြဲ အနေအထား တစ်ခုမှာရှိနေခဲ့ပါတယ် ။
ယခုအချိန်ထိလည်း အင်အားတစ်ခုတည်းအဖြစ်ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ဖို့ထက် အပြစ် လှည့်ပါတ် တင်နိုင်ရေး , ဘောလီဘောပုတ် နိုင်ရေး ,အရှုပ်ထုပ်ကို မျက်နှာလွှဲ ခဲပစ် လုပ်နေကြတာက နှစ်ဘက်စလုံးမှာ ရှိနေ သေးတယ်လို့ မြင်မိပါတယ် ။
ဒီနေရာမှာ ဖြည့်စွက်ချင်တာက ယနေ့ခေတ်ရဲ့အတိုက်အခံဆိုသူတွေရဲ့ ခေါင်းရှောင်မှုဖြစ်သမျှအကြောင်း ၎င်းတို့အကောင်းဖြစ်နေအောင်သိုးရေခြုံ အနေအထားတစ်ခုပါ ။
ယခု နောက်ပိုင်းမှာ အတိုက်အခံ အင်အားစုတွေ အပေါ် လူထု အမြင်ပြောင်းလဲလာပြီး ထောက်ခံမှု ကျဆင်းလာတဲ့ အကြောင်းအရင်းတစ်ခုကို, မွတ်စလင် ကုလားဘက်အား လှည့်ပြီး အကွက် ဆင် ခံရတယ် လို့ အတိုက်အခံ မွတ်ဘက်တော်သားတွေက သတ်မှတ်ကာ ဟန်လုပ်ဝါဒဖြန့်နေကြပြီး မွတ်စလင်ဝါဒ နဲ့ လူမျိုးရေးကြီးစိုးနယ်ချဲ့လာမှုအားဆန့်ကျင်သူ ရဟန်း ရှင်လူတွေကို , ပြဿနာ ပြန်ရှာ နေကြတဲ့ အနေ အထားဟာ အတိုက်အခံ ဆိုသူတွေရဲ့ ထပ်ဆင့် ညံ့ဖျင်း သေးသိမ်မှုလို့ပဲ မှတ်ချက်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ အမှန် တကယ်က -
သမ္မတဖြစ်ရေးနဲ့ မယောင်ရာ ဆီလူး အကျိုး မထူးနိုင်မယ့် ဥပဒေ ပုဒ်မတွေကို ပြင်ဆင်ရေးအတွက် မလိုလား အပ်တဲ့ အင်အားတွေ ဖြုန်းတီးနေပြီး၊ အခွင့်အရေး ပွင့်လင်းနေရာ ရလာမှု အပေါ်မှာ ၊ တကယ့် လုပ်ဆောင်ရမယ့် တိုင်းကျိုးပြည်ပြု တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုများကို ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်အောင် မလုပ်ဆောင် နိုင်သေးတဲ့အပြင်, ဝေဖန် ခံရမှုတွေကို တုန့်ပြန်ရာတွင်လည်း , အလွန်ညံ့ဖျင်း သေးသိမ်တဲ့စိတ်ဓါတ် တွေကို လှစ်ဟပြသနေသလိုမျိုးတွေ အကြိမ်ကြိမ်တွေ့မြင် နေရပါတယ် ။
မြန်မာပြည် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ခံရမှုနဲ့ နိုင်ငံတကာရဲ့ထိုးနှက်ချက်များကို ခံခဲ့ရတာကလည်း အတိုက်အခံ ဆိုသူများ ၏ နှုတ်၏ ဆောင်မမှု၊လက်၏ ဆောင်မမှုတွေနဲ့ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းပါတ်သက်နေတာက ရှင်းပါ တယ် ။ ကျန်တဲ့ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကတော့ စစ်အစိုးရ အာဏာ ချုပ်ကိုင်မှုလို့ပဲ သတ်မှတ်ပါ ။ ကြားထဲက ငထွားဖြစ်ပြီး ဆန်ရင်း အဖွတ်ခံလို့ -ခါး ကောင်းကောင်းနာခဲ့ရတာ ပြည်သူလူထုပါပဲ ။
ခုလက်ရှိမှာ စီးပွားပိတ်ဆို့မှုတွေအတော်အတန်ပြန်လည် ပွင့်လာခဲ့ပြီလို့ ဆိုသော်ငြားလည်း ပြည်သူလူထုတွေက လက်တွေ့မှာ ခက်ခဲနေဆဲ ဆင်းရဲနေဆဲ အနေအထားမှာပဲ ရှိနေပါသေးတယ်။ ခုဆို အတိုက်အခံပါတီကြီး၏ လှုပ်အားတိုးအားတွေနဲ့ ရှေ့သိပ်ရောက်ချင်လွန်းနေတဲ့ အရွေ့တွေကြောင့်လည်း မြန်မာ့ နိုင်ငံရေးက တည်ငြိမ်မှု ရှိနေပါတယ်လို့ မခေါ်ဆိုနိုင်ပါဘူး။ ဘယ်အချိန်ထပြီး ပွက်လောရိုက်ဦးမလဲဆိုတာကို စောင့်ကြည့် နေကြရင်း ပြည်သူလူထု စားဝတ်နေရေးတွေက ပိုပို ခက်ခဲလာတယ်လို့တောင် ဆိုရပါမယ် ။
မှန်တယ် good very good
ဘာကြောင့်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့လဲစစ်အစိုးရကသိသင့်တယ်၊ ပြည်သူတွေငတ်နေလဲ ဂရုမစိုက်ပဲ ကိုယ်မထိတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး ဆိုပြီးနေနေတော့ ပြည်သူတွေဒုက်ခရောက်တာပေါ့။ အမှန်က စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တယ်ဆိုတာ ပြည်သူတွေ ဒုက်ခရောက်နေရင် နားလည်စာနာပြီး၊ ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးအာဏာကိုတစ်ထစ်လျှော့ပေးနိုင်တဲ့ စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ အစိုးရအတွက်မှ ပိတ်ဆို့ရေးလုပ်တာ ထိရောက်နိုင်တယ်။ တစ်ဘို့တည်း အာဏာရူးတွေအတွက်ကတော့ ပိတ်ဆို့ရေးလုပ်လဲအလကားပါပဲ။ ပြည်သူတွေသာ တစ်ယောက်မှ မကျန်သေသွားမယ်၊ အာဏာကတော့ စွန့်မှာမဟုတ်ဘူး။ အခုအာဏာလွှဲပေးလိုက်ပြီလို့ မပြောနဲ့နော်။ ကလေးတောင်သိတယ်။ အရေခွံပြောင်းသွားတာ။